(Sawiro) Biyo Xireenka Deegaanka Laasadawaco Ee Degmada Carmo Oo Gabagabo Maraya | puntlandi.com
Bityo xireenka deegaanka Laasadawaco oo hoostaga degmada Carmo ee gobolka Bari, ayaa maraya heer gabagabo ah, waxaana la filayaa in laso todobaadyada soo socda.
Hawlwadeenada gacanta ku haya biyo xireenka ayaa sheegay in niyo xireenkan uu qayb ka yahay biyo xireenada laga faa’iidaysan doono ee Wasaaradda deegaanka, duurjoogta iyo arrimaha dalxiiska ay ka hirgalisay Puntland.
Sido kale, biyo xireenka deegaanka Dharoor, ayaa isna lagu wadaa in laso afmeero maalmaha soo socda, xilli la filayo in bulshadu ay ka faa’iidaystaan.
Biyaha Roobka ayaan Ummadda Soomaaliyeed aysan ka faa’iidaysan, kuwaas oo badda ku darsama, hasa yeeshe waxaa hadda muuqanaya in bulshadu ay soo afmayso muhiimada ay leedahay ka faa’iidaysiga biyaha Roobka.
Si kastaba ha ahate, dawlada Puntland ayaa biyo xireeno dhowr ah ka hirgalisay deegaano ka tirsan Puntland, kuwaas oo qaarkood dhismahooda la dhameeyay, kuwo heer gabagabo ah maaraya iyo kuwo dhismahoodu uu si habsami leh u socdo.